Amakhava efriji → Izembatho zezitolo ezibandayo • Imifekethiso yekhompyutha yeP & M
ama-overalls isiqandisi yizembatho ezinikezelwe ukusebenza ezimeni lapho izinga lokushisa lehla laya ku -40 degrees C. Le yimikhiqizo esezingeni eliphakeme, ithungwe ngokucophelela okukhulu, osekuvele sekuzibonakalisile ezinkampanini eziningi. Ukwaziswa ngokusebenza kwabo, bakhethwa ngamakhasimende avela emazweni ahlukahlukene. Imvamisa ithengwa ngokuhlangana ne- izicathulo futhi amagilavu. Sincoma futhi izingubo zangaphansi ezishisayookuzokuphelelisa ngokuphelele ukuvikelwa komzimba ekushiseni okuphansi.
IColdstore CS-12 ebanda esitolo
Amakhava afrijini abangochwepheshe anezitifiketi
Kwa pm.com.pl, sinikela ngefriji yobungcweti kanye nezembozo zezitolo ezibandayo, ezihlukaniswa ngokusebenza kanye nokwakhiwa kwesimanje. Imodeli ethandwa kakhulu yi- IColdstore CS-12 ukuqinisekisa ukuphepha nokunethezeka komsebenzi ngokuphepha okuphezulu kakhulu.
I-swimsuit eyodwa-piece inemivimbo ekhanyayo yokubonakala okungcono.
Le modeli ineziphu emilenzeni nasehafu yamagilavu ​​kuma-mockups. Imvunulo iyabamba isitifiketiNgenxa yokuthi ingasetshenziswa ezindaweni lapho izinga lokushisa lifinyelela khona -40 degrees Celsius, livikela ekuthintaneni nasekubandeni kwe-convection. Imodeli yeColdstore CS-12 iqukethe indwangu engaphandle yokuphefumula ye-polyester enezindawo ezingamabala namanzi. Kusuka ochungechungeni lwe-COLDSTROE, futhi sinikela ngejazi le-COLDSTORE CS10 kanye namabhulukwe e-COLDSTORE CS11.
Isembozo sokuvikela samakhaza noma amakamelo abandayo HI-GLO 40 ukuvikelwa kuze kufike ku -83,3 ° C
Okunezinhlobonhlobo Professional for izinkampani professional
Amamodeli esiwanikezayo anezincazelo eziningiliziwe. Ngokwengeziwe, kumodeli ye-Hi-Glo 40, sinikeze isitifiketi esiqinisekisa ukuhambisana ne-UNE-EN 342: 2004 / AC: 2008 standard. Imodeli eshiwo ine-340 g yokufakwa okushisayo, into yangaphandle iyinyiloni, kanti ngaphakathi kwenziwa nge-polyester, kanti ikhola liqukethe i-280 g ye-polyester yoboya. Amakhasimende angabheka ukuthi imikhiqizo yenziwa ngani, kuhloswe ngamazinga okushisa anjani nokuthi isisindo somkhiqizo sinesisindo esingakanani. Amasudi aklanyelwe ukuthi asetshenziswe iminyaka eminingana futhi angavimbeli ukunyakaza emsebenzini ngangokunokwenzeka.
Uma ungabaza, sicela uxhumane nomnyango wethu wamakhasimende, ozojabula ukukusiza ukhethe izingubo ezifanele zefriji nesitolo esibandayo. Siphinde sinikele ngamajakhethi, amabhulukwe, izicathulo, amagilavu.
okubandayo kwesitolosuit for okushisa aphansiama-ovaroli ebusikai-coverall ivikela kuze kufike ku - 40 degreesiyunifomu yokuphephaisudi yokusebenzaokweqanda esiqandisiniIzembozo zeColdstoreAmasudi e-Hi-Gloizembozo zefrijiisethi ebandayo esitoloisethi ebandayo esitoloamasudi ebanda esitoloimvunulo yesitolo ebandayoisudi yokuvikela